Waxaa caawa isbedel lagu sameeyay Taliyeyaasha qaar ka mid ah Saldhigyada degmooyinka gobolka Banaadir, halka kuwo kalena laga wareejiyay degmooyinka ay ka shaqeynayeen. – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Waxaa caawa isbedel lagu sameeyay Taliyeyaasha qaar ka mid ah Saldhigyada degmooyinka gobolka Banaadir, halka kuwo kalena laga wareejiyay degmooyinka ay ka shaqeynayeen.
Allhadaaftimo March 23, 2019 Uncategorized
Taliyayaasha cusub ee la soo magacaabay ayaa badankood ah dhalinyaradii Taliyeyaasha ka eheyd Nabadsugida degmooyinka Muqdihso, kuwaasoo dhawaan lagu biiriyay Ciidanka booliska, waxaana in dib degmooyinkoodii loo soo magacaabo ka shaqeeyay Taliyaha qeybta Guud ee booliska gobolka Banaadir Saadaq Cumar Xasan (Saadaq Joon).
Maxamed Jeego oo hore u ahaa Taliye Kuxigeenkii Nabadsugida gobolka Banaadir, waxaa hada loo magacaabay Taliye Ku Xigeenka Booliska qaybta guud ee Gobolka Banaadir.
Magacaabista Taliyayaashan cusub, ayaa ku soo aaday Saacado kadib weerarkii Shabaab ay ku galeen dhismaha Wasaaraad Shaqada iyo Shaqaalaha Soomalaiya, halkaas oo ay ku naf waayeen dad gaaraya 15 qof, halka ku dhowaad 20 kale ay ku dhaawacmeen.
Shabaabka weerarka qaaday oo tiradooda lagu sheegay 5 ayaa dhamaantoodba la toogtay, waxaana sawirran la soo bandhigay ay muujinayaan dableyda weerarka qaaday oo wadatay dharka Ciidanka booliska noocyadii u danbeeyay.
Saraakiishii Nabad Sugida oo ka faa’ideysaneysa weerarkii maanta ayaa Saldhigyada Caasimada ku safay dhalinyaro aan khibrad badan u leheyn arrimaha booliska, kuwaasoo ahaa Ciidankii NISA ee laga tagay, iyadoo aan la ogeyn isbedelkan cusub waxa uu ku soo korhdin kara amni darada baahsan ee ka jirta Muqdihso.
Previous Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre, ayaa maanta kulan deg deg ah isugu yeeray Taliska Howl-galka AMISOM iyo dawladaha Soomaaliya ka taageera amniga iyo la dagaalanka Argagaxisada
Next Madaxweynaha Jubaland oo magcaabay Guddigii Dorashooyinka Jupaland